ISobantu Shooting Stars kufanele inqobe nakanjani | News24
ISobantu Shooting Stars kufanele inqobe nakanjani
PHOTO: supplied ULindokuhle Holiday we Sobantu Shooting Stars uyajabula emva kokushaya iphenathi yahlula unozinti weMaritzburg City uSifiso Ngema emdlaweni wala maqembu we-ABC Motsepe League ngoMgqibelo.
EMVA kokuphunyula esibhaxwini seMaritzburg City ngoMgqibelo, iSobantu Shooting Stars ibhekene nomthwalo wokuthi nakanjani ithole amaphuzu amathathu lapho itholana ne-Ibisi Blue Birds kule mpelasonto.
Umphumela onjalo ozobeka leli qembu, elidlala ku-ABC Motsepe League, ethubeni lokudlala emidlalweni yokuhlungela (play-offs) abazongena kuNational First Division.
Ekhuluma ne-Echo izolo umqondisi weSobantu Shooting Stars uJabulani Radebe uthe baye emdlalweni weMaritzburg City bezitshela ukuthi bazonqoba noma ikanjani.
“Impela besizitshela ukuthi sizonqoba noma ikanjani kodwa akwangenzeka.
“Manje njengoba sesibhekene ne-Ibisi nje kufanele noma kanjani sinqobe bese sithemba ukuthi iMilford FC [okuyiyo esesicongweni] ayinqobi. Lokhu kuyokwenza ukuthi kudlulele thina kuma-play-offs.
“Siyazi ukuthi kona kunzima kodwa kungenzeka noma yini ngoba yibhola leli futhi impela sisenethuba nathi,” kusho uRadebe.
Ngesizini ka-2012/2013 leli qembu labe selizitshela ukuthi yilo elizoya kuma-play-offs njengoba lalizihola zonke kodwa akwangenzeka emva kokuba laphucwa amaphuzu ayisithupha elaliwathole lidlala noMhlathuze FC.
“UMhlathuze awazanga emidlalweni emva kwalokho kwabe sekuthathwa isinqumo sokuthi ixoshwe bese kuthi wonke amaqembu adlale nawo awina azophucwa amaphuzu,
“Thina njengeSobantu Shooting Stars sabe sikuphikisa lokhu ngoba sazikubona kungekuhle. Sabe sithi okungcono wonke umuntu akanikwe amaphuzu ayisithupha noma udlalile noma akadlalanga nayo kodwa abaphathi beSafa banqaba,” usho kanje uRadebe.
Ukuthi leli qembu lilale isithathu ngesizini edlule kuwuphawu lokuzimisela ukuphokophelela phambili kwiligi eliqhudelana kuyo namanye amaqembu awu-16.
ISobantu Shooting Stars izotholana phezulu ne-Ibisi Blue Birds ngoMgqibelo wona lo ntambama enkundleni yase-Albany Bakery ngakhona eSobantu.
Umdlalo weCity neShooting Stars ubuthanyelwe abantu abalinganiselwa ku-4000 eWadley Stadium.
IMaritzburg City kubikwa ukuthi ibuwuphethe umdlalo iziwombe zombili kanti igoli lokuqala lomdlalo livalelwe phakathi uThobelani Msomi wayo iCity emzuzwini ka-63 esiwombeni sesibili.
Kuthe umdlalo usuya ngasemaphethelweni iCity yadlalisa kabi umdlali weShooting Stars ebhokisini wase unompempe elikhomba emlotheni nokwenze iStars sikwazi ukulinganisa nomdlalo waphela kulinganwa ngelilodwa ngapha nelilodwa ngale.
Sekuyobonakala ngoMgqibelo ke lapho iSobantu Shooting Stars ukuthi izolikhuphula yini izinga ukuze inqobe futhi izibeke ethubeni lokuyoqhudelana kuma-play-offs